FAQ - Ningbo ZKLS
Thina akhiphe elawula ukulawula izinga kusukela impahla kanye ingxenye ukuthenga kuya imikhiqizo siphelile. Sinikeza izinga Maximum futhi safety.The wesithathu kuyoba ngemfudumalo bamukelekile.
Ngingaba ukwenza umyalelo OEM?
Sihlakulela imikhiqizo komuntu siqu amakhasimende ethu usebenzisa yokubeka uphawu lwabo futhi Ukucaciswa. Singenza umklamo noma asebenzise i-design adalwe ikhasimende.
isikhwama sansuku zonke, grey PU shopping bag , PU ethenga isikhwama , isikhwama sokuthenga, pink PU ethenga isikhwama , white PU shopping bag ,